आइमाइ ः डाक्टर साब, मेरो पतिलाइ यहा भित्र बोलाउनुस न प्लिज ! डाक्टर ः नडराउनुस म एकदम सरिफ़ मान्छे हो आइमाइ ः तपाइले कुरा बुझ्नुभएन, त्या बाहिर तपाइको नर्स एक्लै छे क्या !!
झगडा हुने वाला छ
सेरे जुस पसलेसँग: ओ भाई, छिटो जुस देउत, यहाँ झगडा हुने वाला छ।
जुस वालाले सेरेलाई १ ग्लास जुस दिन्छ अनी सेरेले पनि जुस स्वाट्टै पार्छ।
फेरी सेरे, " भाई फेरी १ ग्लास जुस देउत, यहाँ झगडा हुने वाला छ के...."
जुस पसलेले फेरी सेरेलाई १ ग्लास जुस दिन्छ
अनी सेरेले सेरेले त्यो जुस पनि स्वाट्टै पार्छ।
यसरी सेरेले ४-५ ग्लास जुस पिउछ अनी
जुस पसलेले रिसाउदै सोध्छ : हैन दाई तपाईं अघी देखी झगडा हुने वाला छ भन्नुहुँदै छ तर खै कहिले हुन्छ नि??
सेरे : तिमीले जुस को पैसा मागेपछी
बाबु :- छोरी तिमीले १२ सकेपछी के गर्ने प्लान गरेकी छौ त ? छोरी :- म "BBA" गर्छु बुवा । बाबु :- कस्तो कोर्स हो छोरी "BBA" भन्या ? छोरी :- "Boyfriend को Bike मा Aish"
बिहेमा किन रुन्छन केटीहरु
केटा केटीलाई सोध्दै : तिमी केटीहरु बिहे भर जादा किन रुन्छौ ? केटी : अनि के त .... आफ्नो घर बाट लगेर तलाई अर्काको घरमा भाडा माझ्न, लुगा धुन लगायो भने.... त के नाच्छस ?
बेकारमा छोरीलाइ नराम्रो सोचेछु
मुन्द्रे बिहानै आफ्नि छोरीको कोठामा गयो । पुरा चुरोट को गन्ध आइरहेको थियो । मुन्द्रे : यसले चुरोट पिउन थाली । यसो भित्र हेरेको रक्सीको बोतल नि टेबल मै रहेछ । " Oh my god यस्ले त रक्सी पनि पिउन थालिछ क्यारे । " त्यतिकै मा यसो खाट मा हेरेछ, एउटा केटा छोरी संगै सुतेको देखेछ । Thank god यो सब त त्यहि केटा को रहेछ। मैले बेकारमा छोरीलाइ नराम्रो सोचेछु।
बल्छी : ऒइ धुर्मुसे तेरो बुढी सुन्तलीलाई तेरो साथीले घरमा किस गर्दैछ ।
धुर्मुस दौडेर घर जान्छ र तुरुन्त फर्केर आउछ, अनि बल्छिलाई गालामा चड्याम चड्याम २ झापड लागाएर भन्छ : झुट बोल्छस त्यो मेरो साथि नै होइन
दुईटा भाले झिंगा मारे
काले खुशी हुदै आएको देखेर
गोरे : होइन, किन यति सारो खुशी भाको ?
काले : मैले आज तीनवटा पोथी झिंगा अनि दुईटा भाले झिंगा मारे ।
गोरे : ओहो ठुलै काम गरेछस त, तर पोथी र भाले भनेर तलाई कसरी थाहा भो नि ?
काले : तीनवटा झिंगा मेरो बुढीको मेक-अप बक्स माथी बसिराथे अनि दुईटा चाही मेरो खैनीको डिब्बा माथि ।
६ वटा बिरालो
सर: ल म तलाई एउटा प्रश्न सोध्छु ।
मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ ।
फेरी ३ वटा बिरालो दिएँ । अब
कती वटा भयो ? ?
धुर्मुस : ६ वटा । सर: तैले कुरै बुझेनस फेरी राम्रो सँग सुन्, मैले तलाई
२ वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा बिरालो दिएँ । अब
धुर्मुस : ६ वटा । सर: मुर्ख यसरि भएन । ल सुन्, मैले तलाई २
वटा स्याउ दिएँ । फेरी ३ वटा स्याउ दिएँ । अब
धुर्मुस: ५ वटा सर: स्याबास । ल अब भन त मैले तलाई २
वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा दिएँ । अब
धुर्मुस: ६ वटा । सर: (एक चड्कन लगाउदै) तलाई अघी देखी एउटै
प्रश्न सोधी राछु तँ चाही उल्टो उल्टो भन्छस ।
धुर्मुस: (रुदै) सर , मेरो घरमा एउटा बिरालो पहिल्यै देखी छ ।
नोकर्नी र मालिक्नी
नोकर्नी आफ्नी मालिक्नीसँग नोकर्नी : मालिक्निसाब यो हजुरको कुर्ता सलवार फिर्ता लीनुस्
मालिक्नी- किन...के भयो ? मन परेनँ ?
नोकर्नी- मन त परेको थियो तर मैले यो लुगा लगायोकी मालिकले तपाइ सम्झेर वास्ता नै गर्नु हुन्न
अनि ड्राइभर आएर पछाडीबाट टाँसिन्छ ।
मुन्द्रे र धुर्मुसको झगडा
मुन्द्रे र धुर्मुस परिक्षा दिएर निस्केछन निस्कने बितिकै दुवै जनाको झगडा परेछ ।
दुइ जनाको झगडा देखेर नजिकै आएर हर्केले सोधेछ हर्के : किन झगडा गरेको? मुन्द्रे: हेर्न यार धुर्मुसले कापिमा केहि नलेखि त्यतिकै
बुझाएर आएछ हर्के: अनि तिमिलाई के को टेन्सन भो त? मुन्द्रे: अनि मैले पनि केही नलेखिकन बुझाएर आको छु अब सरले मैले
धुर्मुसको सार्यो भनेर नम्बरै दिदैन नि
धुर्मुस आफुलाई खुब स्वर सम्राट मान्थ्यो, एकदिन एउटा किसानलाई गीत सुनायो "गाइ चटारिन्छ........"
केही बेर पछी किसान सुक-सुक गर्दै रुन थाल्यो ....)
धुर्मुस : (मन मनै खुशी हुँदै ) खुशी लाग्यो, मेरो सँगीतको राग बुझ्ने तिमी मात्रै रहिछौ.
किसान : म हजुरको गीत सुनेर रोएको होइन ....
धुर्मुस : अनी किन त ..............?
किसान : पोहोर साल मेरो एउटा गोरु मर्यो, मर्ने बेलामा यस्तै स्वर निकालेको थियो, आज मलाई मेरो गोरुको याद आयो अनी रोएको
नोकर्नीले आफ्नो तलब बढाउन मालिक्नी संग
नोकर्नी : हजुर मेरो तलब बढाउनुपर्यो
मालिक्नी : किन बढाउनुपर्यो ?
नोकर्नी : तीनवटा कारण छन्। पहिलो मैले तपाईंले भन्दा राम्रोसँग लुगा आइरन गर्छु।
मालिक्नी : कसले भन्यो ?
नोकर्नी : मालिकले, अनि दोस्रो कारण, मैले तपाइले भन्दा मीठो खाना बनाउँछु।
मालिक्नी : यो चाहिँ कसले भन्यो ?
नोकर्नी : मालिकले, अनि तेस्रो कारण सेक्समा मैले तपाईंले भन्दा बढी सन्तुष्टि दिन्छु।
मालिक्नी : रिसाउँदै यो पनि तेरो मालिकले भन्या हो ?
नोकर्नी : होइन हजुर, यो कुरा त तपाईंको ड्राइभरले भनेको।
मालिक्नी : ल ल भन्, कति तलब बढाउनुपर्यो ? मैले त्यो ड्राइभरलाई जानेकी छु, झन् कसैलाई पनि नभन् भनेको त....। बित्यासै पारेछ
ऋषि धमला र पारस
धमला– पारस जी, मोबाईल बोक्नु हन्छ ?
पारस– अँ बोक्छु, आईफोन फोर ।
धमला– यत्रो मान्छे भएर तपाई अझै फोर मोबाईल वोक्नु हुन्छ ? सफा मोबाईल बोक्न अझैं तपाईलाई कति लाग्छ ? १ बर्ष, २ बर्ष ? कैले ? कैले ?
पारस– ट्वा धमला- पारस जी तपाई हरुले खेल जिते पछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको फोन आयो रे, वाशिंग मेशिन , राइस कुकर रेफ्रिजेरेटर , आइरन किन आएन ? ? ?
पारश खड्का– ट्वा
चेक गर्ने तरिका
धुर्मुसले घरमा नयां कुकुर किनेर ल्याएछ ।
कुकुरलाई आंगनमा छोडेर आफु पिढीमा बसिरहेको थियो।
त्यतीकैमा माग्ने बुढा धुर्मुसलाई भेट्न आएछ।
पर आंगनमा माग्ने बुढा आउना साथ कुकुर भुक्न थालेछ। माग्ने बुढा डराएर त्यहीं रोकीयो।
धुर्मुस : आईज न आईज केही गर्दैन किन डराको?
माग्ने बुढा : पक्का टोक्न त टोक्दैन नी?
धुर्मुस : मलाई के थाहा भर्खर किनेर ल्याएको हो। टोक्छ की टोक्दैन भनेर चेक गर्नलाई त तंलाई बोलाको नी
आफ्नो स्वास्नी देखि दिक्क भएर एक पुरुष वकिल कहाँ गएछ
पुरुष: लौ हजुर डिभोर्स गरिदिनु पर्यो
वकील: ल डिभोर्स गर्ने हो भने ५० हजार लाग्छ
पुरुष : पागल हो र म ? बिबाह गर्दा पण्डितले १ हजारमा विबहा गराइदेको थियो
वकील: त्यही त थाहा पायौ नि सस्तो कामको परिणाम येस्तै हुन्छ